Ogaden News Agency (ONA) – Saxafiyiin ka kala socota 65 wadan oo lagaga hadlay qodobo ay ka mid ahayd dhibaatada ka jirta Ogadenya
Saxafiyiin ka kala socota 65 wadan oo lagaga hadlay qodobo ay ka mid ahayd dhibaatada ka jirta Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2014
Waxaa wadanka koonfur afrika bishan April 16 keedii kadhacay shir heer caalam ah oo ay qabatay hay,ada International Press Institute World Congress (IPI). Waxaa shirka. Ka qayb galay Xidhiidhiyaha OYSU.SA Mudane Cabdinaasir Aways (Axbaab) sidoo kalle Martini Schibbey oo ahaa wariyihii lagu xidhay Ethiopia ayaa shirka qayb wayn ka qaaray iyo Maxamed Cadaw oo ah wariye ka socday qaybta English-ka ee Aljazeera. Waxaa kaloo Shirka kasoo qaybgaley Suxufiyiin ka kala yimid daafaha calamka ilaa iyo 65 wadan oo aduunka ka kamid ah.
Shirka waxaa lagaga hadlay loona qabatay Xoriyada Saxaafada gaar ahaan waxaa laxusay wadamadan (Freedom Of Press in Ethiopia, Turkiga and Egypt). Shirka oo dadka joogay ay kamid ahaayeen Wasiirka Xafiiska M/weynaha Waaxda Performance Monitoring and Evaluation Departmenta, F.W. De Klerk oo ah Madaxwaynihii hore ee Koonfur Afrika. xiligii cadaanka, Desmon Tutu Madaxa Kaniisadah ee wadanka Koonfur Afrika, Patricia De Lille oo ah Mayarada magaalada Cape Town, Wariyaha Al jazeeta qeebteda Carabiga, Nin la yidhaahdo Jim Clancy CNN ka qeebta Atlanta USA, Salim Amin ninka iskale A24 saxafad layirahdo oo Kenya ka jirta, Gabadha iskaleh City Press ee South Africa magaceda Ferial Haffajee Iyo Alison Bethel Mckenzie IPI Executive Director, Brant Houston oo gudoomiye ka ah Investigative Reporting oo ka socdey College of Media University of Illionis USS, John Daniszewski M/weyne ku xigeenka ahna Tafatiraha Associated Press Ap New York USA iyo Calvin Sims oo ah M/weynaha iyo CEO International House New York USA. Waxaa xisid wayn mudane Maxamed Cadaw oo shirka joogay ahaana saxafi caan ah oo aduunka laga yaqaano. Sidoo kale waxaa shirka. Qayb wayn ka ahaa Martini schibbey oo ka mid ahaa labadii wariye ee lagu xidhay wadanka Ogaadeeniya kadib markii ay katageen wadabka Sweden iyagoo doonaya in ay soo ogaadaan xaqiiqada kajirta. Wadanka
Mr Martini wuxuu ka war bixiyay dhibaatada taala wadanka Ogaadeeniya iyo sida aan loo ogayn. Mr Martini wuxuu sheegay in loo baahan yahay wadankaas in xaqiiqadiisa banaanka lasoo dhigo. Wuxuuna ka sheekeeyay dhibaatadii lamariyay iyo sidii loola dhaqmay, taasoo keentay inuu guud ahaanba is badalay shucuutii dadka oo argagax kunoqoray.
Shirka xiligii lagay qadada ayaa loo kala fadhiisray qaarad qaarad. Waxaana qaarada Afrika kulankeedii (workshop) kaqayb galay Xidhiidhiyaha OYSU/SA. Mudane Cabdinaasir Aways ( Axbaab), wuxuuna waydiiyay wariyaashii faraha badnaa mataqanaan Ogaden? Waxyna ku jawaabeen haa. Isla markaana wuxuu siiyay war ku saabsan xaalada Ogaadeeniya. Isagoo gacanta uga dhiibay waraaq qoraal iyo sawiro tacatiyada ahba.
Kulanka markii ugu dambaysay waxaa lagaga wada hadlay sidii dhibaatada lagu hayo shucuubta ku nool Ethiopia looga arinsan lahaa. Madaxa Hay,adan IPI ayaa sheegtay in ay dhawaan qabteen shir Geeska Afrika kadhacay lana doonayay in madaxda wadamada GA lagaga sixiixo, in ay Madax baneeyaan Saaxafada. Halkaas oo ra’iisul wasaaraha Ethiopia uu diiday in uu shirka yomaado.
Gabagabadii ayaa la isla qaatay in shirkan oo kalle laqabto laguna qabto Myanmar oo ka mid ah qaarada Asia ah 2015.